Cali Jabal: Nin gurigiisa ilaashan waayey meel kale ma weerari karo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Cali Jabal: Nin gurigiisa ilaashan waayey meel kale ma weerari karo
Muqdisho – Mareeg.com: Sarkaalka Alshabaab u qaabilsan gobolka Banaadir, Sheekh Cali Maxamed Xuseen “Cali Jabal” ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu awoodi waayey inuu ilaashada guriga uu degan yahay, sidaas darteedna uusan awood u laheyn inuu weeraro gobollada Alshabaab maamulaan.
“Nin gurigiisa ilaashan waayey, meel kale ma maamuli karo” ayuu yiri Cali Maxamed Xuseen oo la hadlay warbaahinta Alshabaab, islamarkaana xusay iney Alshabaab awood u heleen iney gaaraan meesha ugu dambeysay ee laga maamulo dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Cali Maxamed Xuseen ayaa xusay in weerarkii jimcaha ay ku dileen dad isugu jiray Soomaali iyo ajaanib, inkastoo aan la xaqiijin wararka sheegaya in halkaas ay ki dhinteen dad shishiiye ah.
Alshabaab ayaa ku guuleystay iney ka gudbaan halka ay joogeen ilaalada koowaad ee madaxtooyada kadib markii ay gaari ku qarxiyeen, kadibna waxey gaareen Masjid ku yaallay gudaha madaxtooyada oo uu ku dukado madaxweynaha Soomaaliya oo aan markaas joogin, waxeyna halkaas ku dileen dhowr qof.
21-kii bishaan ayay Alshabaab weerartay madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo ay u suuragashay iney gudaha u galaan Villa Somalia, islamarkaana dad ku dilaan.
Somalia: Mogadishu Women Protest against al-Shabab terror attacks
Muqdisho: Degmo kasta oo ay amaanka kala shaqeynayaan labo wasiir